Taliye Xijaar iyo madaxweyne ku xigeenka Galmudug oo kulan gaara yeeshay | KEYDMEDIA ONLINE
Taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed Taliye Xijaar oo baryahan booqasho ku joogay deegaanada Galmudug ayaa la kulmay madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Ciid.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Taliye Xijaar oo maalmahan ku sugnaa Galmudug ayaa booqday goobo muhiim ah sida saldhigga degmada dhuusamareeb, isagoo diiradda saaraya xaaladda amniga guud ee galmudug, sidoo kale wuxuu la kulmay madaxeyne ku xigeenka Dowlad Goboleedke Galmudug mudane Cali Ciid, waxa ayna ka wada hadleen amniga doorashooyinka xildhibaanimo ee nagu soo fool leh.
Taliyae xijaar oo ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sidoo kalena ah Guddoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka ayaa waxa uu kala hadlay madaxweyne ku xigeenka amniga doorashooyinka gaar ahaan midda ka dhici doonta magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo.
Labada dhinac waxey diiradda wada saareen sidii ay ku dhici laheed doorasho xor iyo xalaal ah oo Galmudug ka dhacda, madaxweyne ciid ayaa ku ammaanay ciidamada booliska iyo guud ahaan laamaha amniga Galmudug doorkooda ku aaddan amniga iyo sida ay daacad u yihiin.
Taliye xijaar ayaa lagu wadaa in uu booqdo deegaano dhowra oo kamida Galmudug gaar ahaan deegaanada ay ka taliyaan Galmudug sida magaalooyinka Guriceel, Balambale, Caabudwaaq, Cadaado iyo Gaalkacyo oo la filayo in dhammaantood uu cagta marin doono, inkastoo hadda uu ku sugan yahay caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb.